Home / बिचित्र संसार (page 10)
अनौठो चिडियाखाना जहाँ हात्ती होइन सिंह सफारी गर्न पाइन्छ
चिडियाखाना भन्ने बित्तिकै वन्यजन्तुहरुलाई कृत्रिम बासस्थानमा बन्द गरिएको हुन्छ । कतिपय आक्रामक तथा सिकारी वन्यजन्तुहरुले चिडियाखाना पुग्ने मानिसहरुलाई आक्रमण नगरुन् भन्नका लागि बलियो पिँजडा वा पर्खालभित्र कैद गरिएको हुन्छ उनीहरुलाई ।
तर अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्समा एउटा यस्तो चिडियाखाना छ जहाँ सिंह जस्ता खतरनाक जनावरलाई पनि खुल्ला छाडिन्छ, खोरमा थुनिँदैन । यति मात्र होइन उक्त चिडियाखानामा सिंहमा चढेर सिंह सफारी गर्न सकिन्छ ।
ब्युनर्सआयर्सको लुजान चिडियाखानालाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक चिडियाखाना पनि भनिन्छ । यस अर्थमा खतरनाक की त्यहाँ सिंहसँग खेल्ने, सुत्ने तथा सिंहमा चढेर सफारी गर्ने मौका प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
चिडियाखानामा रहेका बाघ लगायतका डरलाग्दा वन्यजन्तुलाई पनि छुन र मुसार्न पाइन्छ । फोटोसेसन गर्न पाइन्छ ।
उक्त चिडियाखानाका सिंह तथा बाघहरु किन मानिसहरुसँग यतिधेरै नजिक छन् र आक्रमणमा उत्रिँदैनन् त ? समाचार अनुसार चिडियाखानाका सिंह तथा बाघहरुलाई तालीम दिइएको छ । उनीहरुलाई मानिससँग कस्तो व्यवहार गर्ने, कसरी शान्त रहने भन्ने विशेष तालिम दिइएको हुन्छ ।
सन् १९९४ मा यो चिडियाखाना खुलेको हो । आगन्तुकहरुलाई सिंह तथा बाघहरुसँगै गएर खेल्ने र बस्ने तथा चढ्ने समेत मौका दिन थालिएको लामो समय भैसकेको छ । चिडियाखानामा अहिलेसम्म यी वन्यजन्तुले मानिसमाथि आक्रमण गरेको घटना छैन ।
वन्यजन्तु अधिकारकर्मीहरुले भने चिडियाखानामा सिंहहरुलाई तालिम दिनका लागि निकै क्रुर तरिका अपनाउने गरिएको र सिंहलाई घातक औषधि दिएर लठ्याइएको दाबी गरेका छन् ।
अनौठो वगैँचा जहाँ फक्रिएका छन् रातमा चम्किने गुलाव
तपाइले रातो, निलो, कालो, पहेँलो तथा गुलाबीका साथै सेतो रंगका गुलाब पनि देख्नुभएको छ । तर के तपाइँले एलइडी बल्वजस्तै चम्किने गुलाब देख्नुभएको छ ? यदि देख्नुभएको छैन भने अब कम्तिमा तस्वीरमा भएपनि हेर्नुस् ।
हामीले एउटा यस्तो वगैँचाको बारेमा बताउँदैछौँ जहाँ हजारौँको संख्यामा गुलाब फुलाइएको छ जो रातमा चन्द्रमाले जस्तै प्रकाश दिन्छन् ।
चीनको हुबेइ प्रान्तमा एउटा यस्तो अचम्मको वगैचा रहेको छ, गुलाबका फूलले बनेको । त्यहाँका गुलाब रातमा चम्किन्छन् । रातमा चम्किने गुलाब भनेपछि अचम्ममा नपर्ने कुरै भएन । वास्तवमा ती वास्तविक गुलाबका बोट होइनन् । एलइडी बल्बका गुलाब हुन् ।यी काँचका गुलाब निकै सुन्दर देखिन्छन् । यो बगैँचामा ५२ हजार गोटा यस्ता एलइडी गुलाब छन् ।
हुबेइका जोडीहरुलाई रोमान्स गर्ने राम्रो ठाउँ बनिरहेको छ यो गुलाबी वगैँचा । यसअघि यस्ता एलइडी बल्बका गुलाबी बगैँचाहरु दक्षिण कोरियाको सिओल र हंगकंगमा समेत बनिसकेका छन् ।
बाघले चितुवाको घाँटी समातेपछि.. फोटो फिचर
एजेन्सी: जंगलको राजा सिंहलाई मानिए पनि बाघले चितुवालाई आक्रमण गरी मृत्युको मुखमा पुर्याएको छ।
भारतको जयपुरस्थित आरक्षमा रहेको बाघले चितुवालाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिएको हो।
शुक्रबार भएको सो भीडन्तमा बाघले चितुवाको घाँटी समातेर आक्रमण गरेको थियो। चितुवाले आफूलाई बचाउन हर प्रयास गरे पनि उसले बाघको आक्रमणलाई रोक्न भने सकेनन्। आरक्षमा घुम्न गएका पर्यटकले सो भीडन्त देखेपछि यसरी फोटो खिच्न भ्याए।
दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो खरभुजा, वजन थाहा पाउँदा जिब्रो टोक्नुहुनेछ
गर्मीले आहात बनेका बेला खरभुजा सम्झिने बित्तिकै मुख रसाउँछ । हामीले देख, खाएका खरभुजा भनेका एउटा फलको तौल धेरै बढिमा ६।७ किलो त हुन्छ ।
तर के तपाइँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै खरभुजाको तौल तपाइँको जिउको तौल भन्दा पनि बढि हुन्छ ?हो, चीनको राजधानी बेइजिंगमा एकजना किसानले ८० किलो तौल भएको खरभुजा फलाएका छन् ।
चीनमा हरेक वर्ष खरभुजा खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आयोजना गरिने प्रतियोगितामा ती किसानले आफ्नै बगैचामा फलाएको १७६ पाउण्ड अर्थात् झण्डै ८० किलो तौलको खरभुजा प्रदर्शन गर्दै खरभुजा किंगको उपाधि जितेका छन् । ४६ वषर्ीय किसान ली फेंगचुन पछिल्लो दश वर्षदेखि लगातार यो प्रतियोगितामा पहिलो हुँदै आएको छ ।
पहिलोपटक सन् १९९५ मा प्रतियोगितामा भाग लिँदा उनले १४ किलोको खरभुजा ल्याएका थिए । तर त्यसपछि उनले खरभुजाको तौल तथा मिठासका लागि लगातार प्रयास गरिरहे ।
गतवर्ष पनि उनले ८३ किलोको खरभुजा फलाउँदै यो प्रतियोगिताको विजेता बनेको छ । यो वर्ष पोहोरको भन्दा ३ किलो बढि तौलको खरबुजा फलाउन उनी सफल भएका छन् । आफुले आफ्ना बच्चालाई जस्तै खरबुजालाई स्याहार सुसार गर्ने गरेको ली बताउँछन् ।
बेइजिंगमा सन् १९९८ देखि खरबुजा प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । जसमा स्थानीय किसानहरु आफ्नो बगैचामा फलाएका सबैभन्दा ठूला खरबुजा लिएर प्रतियोगितामा उत्रिन्छन् । खरबुजाको मिठास तथा त्यसको वजनको आधारमा विजेता घोषणा गरिन्छ ।
यी महिलालाई केटाले आफ्नो लिंग देखाएपछि…
एजेन्सी । व्रिटेनकी एक महिलालाई नचिनेको युवकले आफ्नो लिंगको फोटो पठाएपछि युरोपमा हंगामा मच्चिएको छ ।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै सामांताले भनिन्– म सबै पुरुषलाई बताउन चाहन्छु कि सबै महिला यस्तो हर्कत सहन सक्दैन् । चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । तपाईको इज्जत सबैको अगाडि नांगो पार्नेछु ।
समांताले यो पूरा शब्दलाई फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेकी छिन् । कैयौ मानिसले शेयर पनि गरेका छन् ।
३२ जेठ, काठमाडौं । भारतको नयाादिल्लीमा एउटा आमाको कोखमा बच्चाको सट्टा स्पोर्ट्स कार भेटिएको छ । ती महिलाका पतिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेपछि घटना बाहिर आएको हो ।
भारतीय अनलाइन अमर उजालाका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षदेखि यी दम्पत्ति बच्चाको आशमा थिए । पत्नीले वाइवीएफ पद्धतिमार्फत छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । छोरी ६ महिना हुादा उनी फेरि गर्भवती बनेकी थिइन् । यी दम्पत्तिले पेटमा छोरा छ कि छोरी भनेर हेर्न अल्ट्रासाउण्डको सहारा लिएका थिए ।
अल्ट्रासाउण्डमा बच्चाको ठाउँमा स्पोर्ट्स कार देखिएपछि यी दम्पत्ती अचम्मित बनेका थिए । उनीहरुले एक पटक नभई दुई पटक अल्ट्रासाउण्ड गरेका थिए ।
बाबुले चर्चा पाउन अल्ट्रासाउण्डको फोटोलाई बंग्याएर कारको फोटो हालेको भन्ने पनि मानिसहरुको अनुमान छ । कतिपयले अस्पतालकै कुनै स्टाफले यो काम गरेको भन्ने अनुमान पनि लगाएका छन् । खैर, जे होस् यो समाचार आए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यसबारे रमाइला कमेन्टहरु पनि आउन थालेका छन् ।
यस्तो होटल, जहाँ रातमा चुरोट पिउनेलाई भुतले थप्पड हान्दछ
धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै र धुम्रपान गर्न निषेध गरिएको ठाउँमा समेत जबरजस्ती गर्दै चुरोट पिउने मानिसहरु धेरै हुन्छन् । तर भारतमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ धुम्रपान गर्दा अदृश्य शक्तिले जोडसँग थप्पड हान्दछ ।
हो, राजस्थानमा रहेको उक्त ठाउँमा जब कसैले चुरोट सल्काउन थाल्छ तब ऊमाथि जोडदार थप्पड प्रहार हुन्छ । त्यो जोडदार थप्पड आखिर कसले मार्छ ? अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । कोही प्रेतात्माले चुरोट पिउनेहरुलाई थप्पड मारेको अनुमान गरिन्छ ।
राजस्थानको कोटामा रहेको सिभिल लाइन्स नयाँपुरास्थित बृजराज दरबार आफ्नो सुन्दरताको लागि जति चर्चित छ अदृश्य शक्तिले थप्पड हान्ने कारणले झनै चर्चित छ । यो भवनमा होटल रहेको छ । यस हेरिटेड होटलमा जो कोही बस्न चाहन्छ । होटलमा बस्नुअघि उसलाई जानकारी दिइउको हुन्छ की त्यहाँ रातमा चुरोट पिउन मनाही छ ।
किम्बदन्ती अनुसार त्यहाँ एउटा मेजरको भूत घुमिरहन्छ जसलाई अनुसासन मन पर्दछ । उसलाई रातमा चुरोट पिएर टाइम पास गर्ने मानिसहरु तथा ड्युटीमा निदाउने सुरक्षागार्डहरु मन पर्दैन । यदि कुनै गार्ड रातमा ड्युटीको समयमा निदायो भने पनि कोही कराएर गाली गरेको आवाज सुनिन्छ ।
बिहान हेर्दा ड्युटीमा सुत्ने उक्त गार्डको गाला रातो तथा सुन्निएको पाइन्छ । सोही मेजरको भूतले ड्युटीमा निदाउने गार्डको गालामा थप्पड हान्ने विश्वास गरिन्छ । रातमा यो होटलको वगैँचामा पनि कोही जाँदैनन् । वगैँचामा उक्त मेजर तथा उसका बच्चाबच्चीहरुका आत्माहरु घुमिरहने बताइन्छ ।
जब एउटा बाँदरले गराइदियो देशभर लोडसेडिङ
हामीकहाँ बाँदरले बालीनाली खाएर सखाप पारिदिएको तथा मान्छेलाई पनि आक्रमण गर्ने गरेका समाचार आइरहन्छन् । तर एउटा बाँदरको शक्ति बाली खानमा मात्र कहाँ सिमित हुँदो रहेनछ । देशभरको बिजुली काटिदिएर अन्धकार बनाइदिन सक्दो रहेछ एउटा नाथे बाँदरले ।
हालै अपि|mकी देश केन्यामा एउटा बाँदरले पूरै देशलाई अन्धकारमय बनाइदिएको छ । केन्यामा बिजुली उपलब्ध गराउने केन्जेन नामक कम्पनीका अनुसार एउटा बाँदरका कारण पूरै देशको बिजुली आपूर्ति रोकिएको हो ।
कम्पनीले जनाए अनुसार गिटारुस्थित एक जलविद्युत आयोजनाको ट्रान्सर्फमरमाथि एउटा बाँदर अचानक लडपछि ट्रान्सर्फमर पनि खस्यो । जसका कारण उक्त जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित १८० मेगावाटको विद्युत सप्लाइ पूर्णरुपमा रोकियो र पूरै देश अन्धकारमय बन्यो । रोकिएको विद्युत आपूर्ति पुनः सूचारु गर्नका लागि ४ घण्टा लागेको थियो ।
धन्य, बाँदरलाई करेन्ट भने लागेन र देशभर लोडसेडिंग गराउने त्यो बाँदर सकुशल नै रह्यो । केन्या वाइल्डलाइफ सर्भिसका कर्मचारीहरुले उक्त बाँदरलाई उद्धार गरी लगे ।
मालिकका लागि बाघसँग भिड्यो कुकुर, गुमायो आफ्नै ज्यान
भनिन्छ मानिसको सबैभन्दा बफादार साथी कुकुर हो । भारतमा हालै एउटा कुकुरले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।
भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको शाहजहाँपुरमा आफ्नो मालिकलाई बचाउनका लागि एउटा कुकुर बाघसँगै भिडेको छ र आफ्नो ज्यानै बली दिएको छ ।
दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको बरबतपुर गाउँमा शुक्रबार राति यो घटना भएको हो । गुरुदेव सिंह नामका किसान रातमा आफ्नो घर बाहिर सुतेका थिए । उनीसँगै उनले घरमा पालेको ४ वर्षको ज्याकी नामको कुकुर पनि सुतेको थियो ।
राति उनीहरु सुतेको ठाउँमा जंगलबाट बाघ आयो । बाघलाई देखेपछि कुकुर जोडसँग भुक्यो र कुकर भुकेपछि गुरुदेव पनि जागे । नजिकै बाघ देख्दा उनको सातोपुत्लो उड्यो र उनी बाघबाट ज्यान बचाउने उपायको खोजी गर्न थाले । तर बफादार कुकुर हिम्मत जुटाएर बाघमाथि जाइलाग्यो । विचार त्यो नाथे कुकुरको के लाग्थ्यो । उसलाई बाघले च्याप्पै समात्यो र आहारा बनाउनका लागि जंगलतर्फ लग्यो ।
बाघले लगेको ज्याकीलाई खोज्नका लागि गुरुदेवका परिवार रातमै जंगलतिर निस्किए । केही पर पुगेपछि उनीहरुले ज्याकीलाई मरेको अवस्थामा फेला पारे । गाउँलेहरुले उक्त बहादुर कुकुरको शव ल्याए र अर्को विहान सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गरे ।
अफगानिस्तानका अनौठा तथ्य, सायद तपाइँलाई थाहा छैन
आर्य सभ्यताको उद्गम मानिने अफगानिस्तान मुस्लिम अतिवादमा फसेर अहिलेको जर्जर अवस्थामा आउनुअघि मानव सभ्यता तथा संस्कृतिको हिसाबमा निकै धनी देश हो । यद्यपि अहिले पनि अफगानिस्तानमा विभिन्न खाले संस्कार तथा संस्कृति र परम्पराहरु कायम छन् जो बाँकी दुनियालाई अचम्ममा पारिदिने खालका छन् ।
अफगानिस्तानमा नयाँ वर्ष कहिले मनाइन्छ ? अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल के हो ? के तपाइँलाई थाहा छ ?
अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल बजुकसी हो । बुजकसीको अर्थ बाख्रा समात्नु हुन्छ । अर्थात् घोडामा दौडिएर मरेको बाख्रा समात्ने खेल नै अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल हो । यो खेल देशको उत्तरी इलाकामा निकै लोकपि्रय छ र बुजकसीका विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने गरिन्छ ।
अफगानिस्तानमा हरेक वर्ष मार्च २१ मा नयाँ वर्ष मनाइन्छ । नयाँ वर्षलाई अफगानिस्तानमा नवरोज भनिन्छ ।
अफगानिस्तान सन् १९१९ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको हो । स्वतन्त्रताको लागि अफगानीहरुले ३ पटक बेलायतसँग लडाइँ गर्नुपरेको थियो । यस हिसाबले अफगानिस्तान भारत भन्दा २८ वर्ष पहिले स्वतन्त्र भएको हो ।
अफगानी समाजमा हजारौँ वर्ष पूरानो एक परम्परा छ, त्यो हो कथा कविता सुनाउने । पश्चिमी सहर हेरातमा बिहिबारको रात पुरुष, महिला तथा बच्चाबच्ची जम्मा भएर प्राचीन कथाहरु सुन्ने सुनाउने गर्छन् । साथै हेराती सँगीत र चियाको चुस्की पनि लिन्छन् ।
विश्वको सबैभन्दा पहिलो तैलचित्र बनाउने देश अफगानिस्तान नै हो । अफगानिस्तानको बामियान प्रान्तका गुफाहरुमा इशापूर्व ६ सय वर्ष पहिलेका तैलचित्रहरु फेला परेका छन् । अफगानिस्तान कुनैबेला बुद्ध धर्मको केन्द्रजस्तै थियो । बामियानमा बुद्धका दुइ ठूला मूर्तिहरु थिए, जसलाई तालिवानले सन् २००१ मा नष्ट गरेको थियो ।